Kitra – «Chan 2018» Tafita amin’ny dingana manaraka ny Barea | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» Tafita amin’ny dingana manaraka ny Barea
Nazeran’ny Barea, tao amin’ny kianja filalaovany ny Mambas n’i Mozambika. Manohy ny diany ny ekipa malagasy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina “Chan 2018”.
Resin’ny Barea de Madagascar, tamin’ny isa mazava 2 no ho 0, ny Mambas avy atsy Mozambika teo amin’ny lalao miverina, amin’ny fifanintsanana ho an’ny fiadian-toerana amin’ny tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny “Chan 2018”, hotanterahina any Kenya. Fihaonana notanterahina, omaly alahady, tao amin’ny kianja Maputo.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, tsy nihafihafy mihitsy ny Barea fa nanafika sy nanao totoafo tamin’ny fanafihana nefa koa nahay niaro tena tanteraka. Niezaka ny hamono baolina ihany koa ny Mozambikanina, saingy azon’i Leda avokoa ny dakan’izy ireo. 0 no ho 0 ny isa nentin’ny roa tonta niala sasatra.
Nanokatra ny isa ny Barea de Madagascar, tany amin’ny minitra faha-62, tamin’ny alalan’ny baolina tafiditr’i Bela. Efa nanomboka nahazo antoka ny Malagasy teo. Na izany aza, tsy nionona tamin’izany fa mbola niezaka hatrany nanafika. Nitady irika kosa hanasahalana ny isa ny Mozambikanina, saingy tsy tafavoaka mihitsy. Nanampy ny isa indray tany amin’ny fanampim-potoana (90 mn + 2) i Njiva. Baolina izay nampitolefika tanteraka ny Mambas. Nofafan’i Njiva izany ilay “penalty” tsy matiny teo Mahamasina, herinandro lasa. Miandry izay tafavoaka amin’i Angola sy i Maorisy ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana farany.
Teo amin’ny Cosafa U17 indray, resin’i Mozambika, tamin’io isa 2 no ho 0 io, ihany koa ny Barea. Efa raraka ny Malagasy na mbola manana ambin-dalao hifanatrehana amin’i Afrika Atsimo aza.